‘जेसीजमा लागेर समाजसेवामा आफूलाई समर्पित गराउन पाएँ’
अन्तर्वार्ता 61 पटक पढिएको
सुनिल अधिकारी (मूल कार्यक्रम संयोजक)२०१६ बस्तीपुर जेसीज हाँडीखोला, मकवानपुरको सबैभन्दा कान्छो जेसीज भएपनि पछिल्लो समयमा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था हो ।
यसवर्षको जेसीज सप्ताह कात्तिक २४ गते बुधबारबाट सुरु हुँदैछ । उक्त सप्ताहव्यापी कार्यक्रम, जेसीजले गरेका विभिन्न रचनात्मक क्रियाकलाप तथा जेसीजले आगामी दिनमा अँगाल्नुपर्ने बाटोबारे यस दैनिकका संवाददाता सुवास बिडारीले जेसीज सप्ताहका मूल कार्यक्रम संयोजक तथा मकवानपुरका युवा व्यवसायी सुनिल अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको संक्षेप ।
जेसीज सप्ताहको तयारी कहाँ पुग्यो ?
जेसीज सप्ताहको तयारी करिब करिब अन्तिम तयारीमा पुगिसकेको छ । सम्पूर्ण तयारीहरु पूरा भयो भन्दा फरक पर्दैन । कात्तिक २४ गतेबाट सुरु हुने जेसीज सप्ताहका लागि विभिन्न कार्यक्रमका संयोजक, उपसंयोजक, कार्यक्रम स्थल तथा अतिथिलाई नियमन्त्रणसमेत हामीले गरिसकेका छौं । अब हाम्रो सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको उद्घाटनको संकेतमात्र हुन बाँकी छ ।
प्ताहव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत् यसवर्ष के–कस्ता कार्यक्रहरु समावेश गरिएको छ ?
सप्ताहव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत् २४ गते बिहान बस्तीपुर जेसीज र मकवानपुरमा क्रियाशील लायन्स क्लबबीच मैत्रीपूर्ण फुटबल दिउँसो हेटौंडा–५ सिँचाई टोलमा रहेको हाम्रोघरमा खाद्यान्न वितरण, २५ गते बिहान सिर्जनशील बौद्ध अनाथ प्रावि नेवारपानीमा पुस्तक तथा स्टेशनरी सामग्री वितरण र सोही दिन दिउँसो जेसीजका नयाँ सदस्यहरुका लागि उत्प्रेरणात्क तालिमको आयोजना गरिने कार्यतालिका रहेको छ । २६ गते बिहान बस्तीपुरमा प्रहरीसंगको सहकार्यमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने र दिउँसो निर्मल उच्चमावि बस्तीपुरमा उदयसिंह पाठक स्मृति माविस्तरीय हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता, २७ गते शनिबार बिहान १० बजे जेसीज सचिवालय बस्तीपुरमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम समापन तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम रहेको छ ।
सप्ताहव्यापी भन्ने तर, थोरै दिनमा सिध्याउने परिपाटीको विकास हुँदै गयो । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न हो । यस विषयमा हामीमाझ पनि व्यापक छलफल र तर्कबितर्कहरु भए । के साँच्चै युवाहरु निराश तथा निस्क्रिय भएका हुन् त भन्ने आम चासो रहेको छ । तर, त्यसो होइन् । जेसीजमा लागेका युवाहरु कुनै न कुनै रुपमा विभिन्न संघसंस्था तथा व्यवसायसँग जोडिएका छन् । त्यसकारणले सामाजिक क्रियाकलाप गर्नका लागि सातै दिन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । हामीले दिन छोट्याउँदैमा हाम्रो कार्यक्रममा कमी आउने छैन । हामी थोरै दिनमा धेरै रचनात्मकरुपमा सामाजिक क्रियाकलपामा लाग्नेछौं । जसले गर्दा जेसीजले थोरै दिनमा धेरै कार्यक्रम गर्न सक्छने भन्ने सन्देश पनि हामीले दिन खोजेका हौं ।
गतवर्षभन्दा खासै फरक कार्यक्रमहरु ल्याउन सक्नु भएन नि ? किन होला ?
निश्चय पनि यो कुरा साँचो हो । हामीले गतवर्षको भन्दा खासै फरक कार्यक्रम नगरेपनि फरक कार्यक्रम भने तयार पारेका छौं । हामीले गर्ने क्रियाकलापले समाजमा उथलपुथल ल्याउने होइन । हामीले समाजमा रहेका आमयुवाहरुलाई प्रेरण मिल्ने र सामाजप्रति बफदार हुने शैलीका छोटो, मिठो, आकर्षक र रचनात्मक क्रियाकलाप गर्ने हो । हामीले विभिन्न किसिमका ठूलाठूला कार्यक्रमहरु नगरेको भने पक्कै होइन । अहिले हामीले हेटौंडा–२७, बसामाडीस्थित बाँसघारीमा रहेको कालिका प्राविलाई करिब १२ लाख रुपियाँ बराबरको सहयोगसमेत उपलब्ध गराएका छौं । हामी अन्य समयमा ठूलाठूला कार्यक्रम गरिरहेका हुन्छौं । जसलाई हामीले प्रचारप्रसार गर्दैनौं । तर, जेसीज सप्ताह हाम्रो मुख्य चाड जस्तै भएकाले व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने गरेका छौं।
जेसीजले रचनात्मक क्रियाकलाप गरेर आमसमुदायको मन जित्नुपर्ने थियो । तर, सोहीअनुसार सबैको मन जित्न सकेन नि ?
यो प्रश्नमा म पूर्णरुपमा सहमत छु । तर, अहिले देशमा रहेका आमसमुदाय राजनीतिक तथा अन्य कारणले निराश छन् । हाम्रो संस्था पनि त्यसबाट अछुतो रहने कुरौ भएन । हामीले समाजको हित हुने विभिन्न किसिमका कार्यक्रम गरेपनि गतवर्ष नेपाल जेसीज उमेर हदका कारण भएको विवाद र देशमा रहेको अस्थीर राजनीतिक कारणले गर्दा सबैको मन जित्ने गरी काम गर्न सकेका छैनौं । नेपाल जेसीजका विवादका कारण हामीले वर्षभरिमा गर्नुपर्ने कार्यतालिका प्राप्त भएन । त्यसले गर्दा हाम्रो जेसीजले मात्र होइन देशभरकै जेसीजले पछिल्लो समय आमसमुदायको मन जित्ने शैलीका रचनात्मक क्रियाकलापहरु गर्न सकिरहेको छैन ।
जेसीजमा लागेर तपाईंले के पाउनुभयो ?
अहिले म जुन अवस्थामा छु, त्यो जेसीजकै कारणले छु भन्ने लाग्छ । हाल मैले समाजमा जे जस्तो कार्यहरु गरिरहेको छु, त्यो सबै जेसीजबाटै सिकेर गरेको हुँ । साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रममा पनि जेसीजबाटै सिकेको कुराहरुलाई उपयोग गरेको छु । जेसीजमा लागेर मैले नेतृत्व विकासको मौका पाएँ भने धेरै साथीहरुसंग घुलमिल भएर आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउने मौका पनि पाएको छु । जेसीजमा लागेर नै मैले आफूलाई समाजसेवामा समर्पित गर्न पाएको छु । जेसीजमा आफ्नो पैसा खर्च गरेर समाजसेवा गर्ने गरिन्छ । जेसीजमा लागेका युवाहरुबाट संकलित थोरैथोरै रकमबाट पनि धेरै ठूलाठूला कार्यहरु हुने गर्दछ । त्यसमा आफूलाई सहभागी गराउने सुवर्ण अवसर मैले पाएको छु ।
आम युवाहरुले हेर्ने नजरमा जेसीज कस्तो संस्था हो ? जेसीजसँग युवाहरुले के आशा राख्ने ?
जेसीज युवाहरुको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास गर्नुको साथै जेसीजमार्फत् समाज सुधारका लागि खट्ने युवाहरुबाट थोरैथोरै रकम संकलन गरेर स्वयम्सेवा गर्ने संस्था हो । हामी अन्य संस्थाहरुजस्तो वैदेशिक वा स्थानीय सहयोगबाट चल्ने संस्था होइनौं । आफूले व्यवसायमार्फत् आर्जन गरेको रकमको केही हिस्सा सामाज परिवर्तनका लागि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै एकढिक्क भएर अगाडि बढ्ने संस्था हो जेसीज । यहाँ एक व्यक्ति एकवर्ष एक कार्यकाल हुने भएकाले पदका लागि भन्दा पनि नेतृत्व र सामाज रुपमान्तरणकै लागि काम गर्ने संस्था हो भनेर युवाहरुले बुझ्न जरुरी
रहेको छ । जेसीजमा लाग्ने युवाहरु भनेका एक किसिमले समाजप्रति सचेत र शिक्षित युवाहरुको जमात हो । यसलाई प्लेटफर्म मानेर अगाडि बढ्ने सकिने प्रशस्त आधारहरु रहेकाले आमयुवाहरुले यसविषयलाई बुझ्न जरुरी छ ।
2419046	Times Visited.